Mid kamid ah askartii ay DF geysay Dhuusamareeb oo la khaarijiyey -News and information about Somalia
Home Warkii Mid kamid ah askartii ay DF geysay Dhuusamareeb oo la khaarijiyey
Wararka naga soo gaarayo Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug ayaa sheegayo in halkaas lagu toogtay mid kamid ah askartii ay Dowladda Soomaaliya geysay Magaaladaas.
Sida wararka sheegayaan askarigaan ayaa waxaa toogtay askari kale oo ka tirsan Ciidamada Dowladda kadib markii uu soo kala dhex galay muran aan la ogeyn waxa uu ka dhashay.
Muranka kadib goobjoogayaal ayaa Warkii Online u xaqiijiyey in askariga wax dilay xabad ku dhuftay marxuumka la dilay oo hadda la geeyey meydkiisa Isbitaal.
Ciidamo kale oo ku sugnaa goobta ayaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen askarigii dilka geystay, kaas oo lagu xiray saldhigga magaalada Dhuusamareeb.
Weli arrintaan ma aysan ka hadlin Saraakiisha Ciidamada Dowladda ee ku sugan Magaalada Dhuusamareeb.
Dilka askarigaan ayaa kusoo aadayo xilli magaalada Dhuusamareeb ay socoto howlaha lagu dhisayo Maamulka Galmudug isla markaasna ay weli taagan tahay xiisadda u dhaxeyso Ahlu Sunna iyo Dowladda Dhexe.
Wixii kusoo kordha kala soco Warkii Online
Previous articleAwooddii Axmed Madoobe ee J/land oo hoos u dhacday & Khal khal ka jira Kismaayo
Next articleCumar Filish iyo Wasiirka Dastuurka oo kawada hadlay maqaamka Muqdisho